Uthini "Ubulumko Bokusezulwini"?
Ukuqwashiswa koMntu oLungileyo
Ubulumko bukaSolose bubhekisela ekuqondeni kukaSocrates ngemida yolwazi lwakhe kuba uyazi kuphela into awaziyo kwaye akenzi ukuba acinge ukuba uyazi nantoni na ngaphantsi. Nangona akakaze kubhalwe ngokuqondile nguSocrates njengengcamango okanye ukuphathwa, ukuqonda kwethu ngefilosofi zakhe njengoko zihlobene nobulumko obuvela kwiincwadi zikaPlato kule ndaba. Kwimisebenzi efana ne "I-Apology," uPlato uchaza ubomi kunye novavanyo lukaSocrates oluchaphazela ukuqonda kwethu kwinto ebaluleke kakhulu "yobulumko bukaSolomon:" Sinobuqili nje ukuqonda kwethu ukungakwazi kwethu.
Ndiyazi ukuba Ndiyazi ... Into?
Nangona kuthethwa nguSocrates, owaziwayo ngoku "ndiyazi ukuba andiyazi nto" ngokubhekiselele ekuchazeni i-akhawunti kaClato kaSocrates, nangona kungakhange kuthethwe ngqo. Enyanisweni, u-Socrates udla ngokubaluleka ngokubaluleka kwakhe kwintsebenzo kaPlato, kwanokuba uya kuthi uya kufela. Sekunjalo, ukuvakalelwa kweli binzana kufakazela ezinye zeengcaphuno ezidumileyo zikaSocrates ngobulumko.
Ngokomzekelo, uSocrates uthe wathi: "Andiyicinga ukuba ndiyazi into endiyaziyo." Ngokomxholo wale ngqungquthela, uSocrates uchaza ukuba akayithathi ukuba unolwazi lwabagcisa okanye abaphengululi kwizifundo awayezifundanga, ukuba akayikho inkohliso yokuziqonda. Kwesinye isicatshulwa kwisihloko esifanayo sobuchule, uSocrates wambi wathi, "Ndiyazi kakuhle ukuba andinalo ulwazi olufunekayo lokuthetha" ngesihloko sokwakha ikhaya.
Yintoni enyanisweni nguSocrates kukuba uthethe ngokuchaseneyo "Ndiyazi ukuba andiyazi nto." Ingxoxo yakhe rhoqo yeengqondo kunye nokuqonda iingongoma kwizinto zakhe zobulumko.
Enyanisweni, akayikwesaba ukufa kuba uthi "ukwesaba ukufa kukucinga ukuba siyazi into esingaziyo," kwaye akakho ukukhohlisa ukuqonda okokufa kunokuthetha.
Socrates, Ubulumko Bantu
"Kwi- Apology ," uPlato uchaza uSocrates kwilingo lakhe ngo-399 BCE apho uSocrates etshela inkundla indlela umhlobo wakhe uChaerephon wabuza ngayo i-Delphic Oracle ukuba ubani obenobulumko ngaphezu kwakhe.
Impendulo ye-oracle - ukuba akukho mntu uhlakaniphile kunokuba uSocrates - wamshiya wamangaliswa, ngoko waqala ukufuna umntu onobulumko ngaphezu kwakhe ukuze aqinisekise ukuba i-oracle ayiphutha.
Yintoni uSocrates ayifumeneyo, nangona kunjalo kukuba nangona abantu abaninzi babe nezakhono ezithile kunye neendawo zobungcali, bonke babecinga ukuba babezilumko ngezinye iimeko-ezifana neyiphi imigqaliselo karhulumente ayifanele ayilandele - xa ngokucacileyo ayengekho. Wayegqiba ukuba i-oracle yayilungileyo ngengqiqo ethile: yena, uSocrates, wayenobulumko kunabanye kule ntlonelo enye: ukuba wayeyazi ngokungazi kwakhe.
Olu lwazi luhamba ngamagama amabini abonakala echasene omnye komnye: " Ukungazi ngokungazenzisiyo " kunye "noBulumko bukaThixo." Kodwa akukho ukuphikisana okwenene apha. Ubulumko bukaSolomon luhlobo lokuthobeka: lithetha nje ukuqonda ukuba umntu omncinci uyayazi ngokwenene; indlela iinkolelo ezingaqiniseki ngayo; kwaye kwenzeka ukuba baninzi kubo bangaphikiswa. "Kwi-Apology," uSocrates akaphiki ukuba ubulumko bokwenyaniso - ingqiqo yangempela kwimeko yokwenene - inokwenzeka; kodwa ubonakala ecinga ukuba uyonwaba kuphela ngabothixo, kungekhona ngabantu.
Inkcazo yomlomo wesiXhosa
Ukurhoxiswa / ukuhlawula
Iingcebiso ezili-10 zokuFunda uLwimi lwangaphandle njengoMdala
Iiprofayili zeCrocodile kunye neMifanekiso
Mayelana ne-Delphi Programming - kubaThuthukisi be-Novice kunye nabaTyeleli bokuQala bokuQala
Inkululeko Yenkolo eUnited States
Iindlela ezi-7 zokusebenzisa i-PowerPoint njengoNcedo lweZifundo